Happy and Healthy Relationship Tips - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
“ပြျောရှငျတဲ့ ခဈြခွငျး ကနျြးမာတဲ့ အိမျထောငျရေး “
ခဈြသူရညျးစားပဲ ဖွဈဖွဈ အိမျထောငျတဈခုကို တညျဆောကျတာပဲ ဖွဈဖွဈ ပြျောရှငျခိုငျမွဲတဲ့ ခညျြနှောငျမှု ဖွဈဖို့ လိုအပျပါတယျ။ပြျောရှငျတဲ့ ကနျြးမာတဲ့ relationship တဈခုဖွဈဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ အခကျြလေးတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ sex တဈခုတညျးလား ? မဟုတျပါဘူး ။ ဒီပွငျ နောကျထပျ အကွောငျးအရာတှေ ရှိနပေါသေးတယျ။
ပှငျ့လငျးစှာပွောဆိုဖို့ အရေးကွီးပါတယျ ။ အငွငျးပှားမှုကို မရှောငျပါနဲ့။ မမွိုသိပျပါနဲ့။ ပှငျ့လငျးစှာ ပွောဆိုဆကျဆံခွငျး ဆှေးနှေးခွငျးက ခိုငျမွဲတဲ့ ခဈြခငျရငျးနှီးမှုကို ရရှိစပေါတယျ။ ကနျြးမာပြျောရှငျတဲ့ အိမျထောငျရေး ပိုငျဆိုငျသူတှကေ အငွငျးပှားမှုကို မရှောငျကွသလို ဘယျလို အငွငျးပှားရမယျဆိုတာလညျး ကောငျးကောငျးသိပါတယျ။ ဖုနျး တကျဘလကျ လကျတော့ပျကနေ အငွငျးပှားတာမြိုး မလုပျကွဘဲ သူတို့ဟာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျပွီး အေးအေးဆေးဆေး ဆှေးနှေးကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
၂။ အသေးအဖှဲလေးတှကေိုလညျး ဂရုစိုကျပါ
“ကြေးဇူးတငျပါတယျ” ” ကိုယျ့ကို ကြေးဇူးပွု၍ ” စသညျဖွငျ့ ” Thank you so much , please “ဆိုတဲ့ စကားလေးတှကေ သူစိမျးတှကေိုပဲ ကုမ်ပဏီလုပျငနျးမှာပဲ သုံးရတာမဟုတျပါဘူး။ အသေးအဖှဲစကားလုံးလေးတှကေိုလညျး မမလေို့ကျပါနဲ့ ။”ကိုယျနဲ့ နှဈအတျောကွာရှိပေးလို့ ကြေးဇူးတငျတယျ” ဆိုတာမြိုး တဈခုခု လိုအပျတိုငျး ” ကြေးဇူးပွုပွီး ” လို့ ပွောတာမြိုးတှကေို အလုပျမှာ ဧညျ့သညျတဈယောကျကို ပွောတာအပွငျ သုံးလို့ရတယျဆိုတာလညျး သတိရလိုကျပါ။ အခုပဲဖွဈဖွဈ ကြေးဇူးတငျပါတယျ လို့ သူ့ကို စပွောလိုကျပါ။
Gym club တှေ ယောဂသငျတနျးတှေ Zumba နဲ့ dance club တှေ မှာ အတူတူ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရငျး ကခုနျရငျး ပြျောရှငျဖို့ လညျး ဖနျတီးနိုငျပါတယျ။ လလေ့ာခကျြတှအေရ အတူတူ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတဲ့ စုံတှဲတှဟော ကနျြးမာရုံတငျမကဘူး ၊ သူတို့ရဲ့ ခဈြသူရှေးခယျြမှု လကျထပျမှုအတှကျ ပိုပွီး ကနြေပျကွပါတယျတဲ့။ စိတျပညာဆိုငျရာလလေ့ာခကျြတှအေရ လကေ့ငျြ့ခနျး အတူလုပျတဲ့အခါ ဇီဝကမ်မဆိုငျရာ နိုးထမှုတှကေ ကိုယျလကျနှီးနှောတဲ့ အခါမှာ နိုးကွှမှုတှလေို အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိပါတယျတဲ့။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရငျးနဲ့ ခဈြခွငျးမှာ ပြျောဝငျလိုကျပါ။
၄။ ခရီးတှေ အတူသှားပါ။
အားလပျရကျတှမှော ခရီးတှေ အတူထှကျတာဟာလညျး ပြျောရှငျကနျြးမာတဲ့ relationship ကို ရရှိစပေါတယျ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အားကိုးလာမယျ။ ပိုပွီး ယုံကွညျစိတျရှိလာမယျ။နှဈယောကျတညျး ဒါမှမဟုတျ ကိုယျတှအေတှဲနဲ့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့စုပွီး မကွာခဏ ခရီးသှားပေးပါ။
အတူတူရှိနခြေိနျမှာ ပြျောရှငျစရာတှပွေောပွီး ရယျမောဖို့လညျး မမလေို့ကျပါနဲ့။ရယျမောခွငျးဟာ ခန်ဓာကိုယျကို ပွလြေော့စပွေီး ခုခံအားစနဈကို လညျး တိုးမွငျ့စပေါတယျ။ အနျဒေါ့ဖငျးလို့ချေါတဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့ ဟျောမုနျးကို လညျး ထှကျစပေါတယျ။ဟနျဆောငျပွုံးရယျခွငျးကတောငျ အကြိုးရှိပါတယျ လို့ ပွောတဲ့အတှကျ ခဈြသူနဲ့ ပြျောရှငျရယျမောခွငျးကတော့ ပိုပွီး ကနျြးမာစမှော အမှနျပါပဲ။
၆။ အတူတူ စားသောကျပါ
အတူတူစားသောကျရတဲ့ ညစာ နံနကျစာတှကေ အိမျထောငျရေး သို့မဟုတျ ခဈြခွငျးတှကေို ခိုငျမွဲစပေါတယျ။ အတူတူရှိတဲ့ ညစာစားပှဲတှကေ အာဟာရဆိုငျရာရော စိတျပိုငျးဆိုငျရာရော ပွညျ့ဝစမှောပါ။ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ အိမျခကျြ ထမငျးဟငျးတှရေယျ အတူတူလကျဆုံစားပွီး စကားစမွညျပွောဖို့ ရယျမောဖို့ရယျကို မပကျြကှကျလိုကျပါနဲ့။
နတေို့ငျးလိုလို မိမိရဲ့ အိမျထောငျဖကျနဲ့ ကိုယျလကျနှီးနှောပေးတဲ့အခါ စိတျဖိစီးမှု လြော့ကစြရေုံတငျမကဘူး။ ကနျြးမာရေးကို ကောငျးမှနျစကော အိမျထောငျရေးလညျး တညျမွဲတာကို စဈတမျး တခြို့အရ တှရှေိ့ရပါတယျ။ ကိုယျလကျနှီးနှောခွငျး (အတူတူနခွေငျး)ဟာ သှေးဖိအားကို လြော့ကစြပွေီး စိတျဖိစီးမှုတှေ လြော့ကစြကော နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျပြျောစပေါတယျ။
၈။ တာဝနျတှေ လဲလှယျပါ။
ဒီတဈပတျလုံး သူက ကားမောငျးပို့တယျ။ နောကျတဈပတျ ကိုယျက တလှညျ့ ကားမောငျးတာမြိုးပေါ့။ နောကျတဈပတျမှာ ကိုယျ့ကို ဟငျးခကျြကြှေးဖို့ သူ့ကို ပူဆာလိုကျတာမြိုးပေါ့။
၉။ စိတျဆိုးပွီး မအိပျစကျပါနဲ့
အလုပျကပွနျလာလို့ အလုပျတှနေဲ့ ပငျပနျးနတေဲ့ ညနခေငျးတှမှော ငွငျးခုနျရနျဖွဈတာမြိုး စိတျဆိုးတာမြိုးတှေ မလုပျပါနဲ့။ နှဈယောကျစလုံး ပငျပနျးနတေဲ့ စိတျတိုနတေဲ့ အခြိနျမှာ ထိပျတိုကျမတှတေ့ာ ကောငျးပါတယျ။ “မနကျမှ ပွောရအောငျ ” ဆိုပွီး ကွညျကွညျလငျလငျ နိုးထလာတဲ့ နံနကျခငျးမှာ အဲဒီ အငွငျးပှားဖှယျကိစ်စတှကေို ဆှေးနှေးဖို့ ရှဆေို့ငျးလိုကျပါ။
၁၀။ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ပွောငျးလဲမှုတှကေို လကျခံပေးပါ။
ကိုယျရော သူရော အိုမငျးလာကွမှာ မဟုတျလား။ ဒါပမေယျ့ ရငျ့ကကျြမှုတှေ ခိုငျမွဲတဲ့ အိမျထောငျတဈခုကတော့ တညျရှိရမယျမဟုတျလား။ အတူတူ သှားနတေဲ့ ခရီးမှာ ပျေါလာတဲ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ အပွဈအနာအဆာလေးတှကေို ခဈြခွငျးအားဖွငျ့ လကျညှိုး မထိုးဘဲ နထေိုငျသငျ့ပါတယျ။
ကလေးမှေးပေးရလို့ ဗိုကျကွောတှပွေတျနရေငျလညျး ဒါမှမဟုတျ ဝလာရငျလညျး အပွဈမမွငျရကျသငျ့သလို အလုပျကွိုးစားရငျး ဘီယာဗိုကျလေးဖွဈလာတာ နဖူးလေး အနညျးငယျပွောငျလာတာလညျး အရေးမကွီးဘူးလို့ တှေးပေးရမှာပါပဲ။ အသကျအရှယျကွီးလာလို့ အရေးအကွောငျးတှပေျေါလာလညျး “ကိုယျဘယျလိုနလေဲ” လို့ မေးရငျ ” ကိုယျ့ယောကျြားက ခြောတာပေါ့ ” ” ကိုယျ့မိနျးမက လှဆဲပါကှာ ” လို့ ဘဝရဲ့ အရေးအကွောငျးတှကေို ခဈြမွတျနိုးစှာပွောပွပေးနိုငျရမှာပါ ။ “ကိုယျ မငျးကို ခဈြတယျ ” ” I love you ” ဆိုတဲ့ စကားလေးနဲ့ အဆုံးသတျပေးရငျးပေါ့။
"ပျော်ရွှင်တဲ့ ချစ်ခြင်း ကျန်းမာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး "
ချစ်သူရည်းစားပဲ ဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွှင်ခိုင်မြဲတဲ့ ချည်နှောင်မှု ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်တဲ့ ကျန်းမာတဲ့ relationship တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အချက်လေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ sex တစ်ခုတည်းလား ? မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီပြင် နောက်ထပ် အကြောင်းအရာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
ပွင့်လင်းစွာပြောဆိုဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ။ အငြင်းပွားမှုကို မရှောင်ပါနဲ့။ မမြိုသိပ်ပါနဲ့။ ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းက ခိုင်မြဲတဲ့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကို ရရှိစေပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ပိုင်ဆိုင်သူတွေက အငြင်းပွားမှုကို မရှောင်ကြသလို ဘယ်လို အငြင်းပွားရမယ်ဆိုတာလည်း ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ ဖုန်း တက်ဘလက် လက်တော့ပ်ကနေ အငြင်းပွားတာမျိုး မလုပ်ကြဘဲ သူတို့ဟာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး ဆွေးနွေးကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ အသေးအဖွဲလေးတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်ပါ
"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" " ကိုယ့်ကို ကျေးဇူးပြု၍ " စသည်ဖြင့် " Thank you so much , please "ဆိုတဲ့ စကားလေးတွေက သူစိမ်းတွေကိုပဲ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းမှာပဲ သုံးရတာမဟုတ်ပါဘူး။ အသေးအဖွဲစကားလုံးလေးတွေကိုလည်း မမေ့လိုက်ပါနဲ့ ။"ကိုယ်နဲ့ နှစ်အတော်ကြာရှိပေးလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်" ဆိုတာမျိုး တစ်ခုခု လိုအပ်တိုင်း " ကျေးဇူးပြုပြီး " လို့ ပြောတာမျိုးတွေကို အလုပ်မှာ ဧည့်သည်တစ်ယောက်ကို ပြောတာအပြင် သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာလည်း သတိရလိုက်ပါ။ အခုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ သူ့ကို စပြောလိုက်ပါ။
Gym club တွေ ယောဂသင်တန်းတွေ Zumba နဲ့ dance club တွေ မှာ အတူတူ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း ကခုန်ရင်း ပျော်ရွှင်ဖို့ လည်း ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရ အတူတူ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ စုံတွဲတွေဟာ ကျန်းမာရုံတင်မကဘူး ၊ သူတို့ရဲ့ ချစ်သူရွေးချယ်မှု လက်ထပ်မှုအတွက် ပိုပြီး ကျေနပ်ကြပါတယ်တဲ့။ စိတ်ပညာဆိုင်ရာလေ့လာချက်တွေအရ လေ့ကျင့်ခန်း အတူလုပ်တဲ့အခါ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ နိုးထမှုတွေက ကိုယ်လက်နှီးနှောတဲ့ အခါမှာ နိုးကြွမှုတွေလို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်တဲ့။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်းနဲ့ ချစ်ခြင်းမှာ ပျော်ဝင်လိုက်ပါ။
၄။ ခရီးတွေ အတူသွားပါ။
အားလပ်ရက်တွေမှာ ခရီးတွေ အတူထွက်တာဟာလည်း ပျော်ရွှင်ကျန်းမာတဲ့ relationship ကို ရရှိစေပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အားကိုးလာမယ်။ ပိုပြီး ယုံကြည်စိတ်ရှိလာမယ်။နှစ်ယောက်တည်း ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တွေအတွဲနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီး မကြာခဏ ခရီးသွားပေးပါ။
အတူတူရှိနေချိန်မှာ ပျော်ရွှင်စရာတွေပြောပြီး ရယ်မောဖို့လည်း မမေ့လိုက်ပါနဲ့။ရယ်မောခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြေလျော့စေပြီး ခုခံအားစနစ်ကို လည်း တိုးမြင့်စေပါတယ်။ အန်ဒေါ့ဖင်းလို့ခေါ်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဟော်မုန်းကို လည်း ထွက်စေပါတယ်။ဟန်ဆောင်ပြုံးရယ်ခြင်းကတောင် အကျိုးရှိပါတယ် လို့ ပြောတဲ့အတွက် ချစ်သူနဲ့ ပျော်ရွှင်ရယ်မောခြင်းကတော့ ပိုပြီး ကျန်းမာစေမှာ အမှန်ပါပဲ။
၆။ အတူတူ စားသောက်ပါ
အတူတူစားသောက်ရတဲ့ ညစာ နံနက်စာတွေက အိမ်ထောင်ရေး သို့မဟုတ် ချစ်ခြင်းတွေကို ခိုင်မြဲစေပါတယ်။ အတူတူရှိတဲ့ ညစာစားပွဲတွေက အာဟာရဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ပြည့်ဝစေမှာပါ။ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အိမ်ချက် ထမင်းဟင်းတွေရယ် အတူတူလက်ဆုံစားပြီး စကားစမြည်ပြောဖို့ ရယ်မောဖို့ရယ်ကို မပျက်ကွက်လိုက်ပါနဲ့။
နေ့တိုင်းလိုလို မိမိရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ကိုယ်လက်နှီးနှောပေးတဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျစေရုံတင်မကဘူး။ ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေကာ အိမ်ထောင်ရေးလည်း တည်မြဲတာကို စစ်တမ်း တချို့အရ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ကိုယ်လက်နှီးနှောခြင်း (အတူတူနေခြင်း)ဟာ သွေးဖိအားကို လျော့ကျစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့ကျစေကာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်စေပါတယ်။
၈။ တာဝန်တွေ လဲလှယ်ပါ။
ဒီတစ်ပတ်လုံး သူက ကားမောင်းပို့တယ်။ နောက်တစ်ပတ် ကိုယ်က တလှည့် ကားမောင်းတာမျိုးပေါ့။ နောက်တစ်ပတ်မှာ ကိုယ့်ကို ဟင်းချက်ကျွေးဖို့ သူ့ကို ပူဆာလိုက်တာမျိုးပေါ့။
၉။ စိတ်ဆိုးပြီး မအိပ်စက်ပါနဲ့
အလုပ်ကပြန်လာလို့ အလုပ်တွေနဲ့ ပင်ပန်းနေတဲ့ ညနေခင်းတွေမှာ ငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်တာမျိုး စိတ်ဆိုးတာမျိုးတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ နှစ်ယောက်စလုံး ပင်ပန်းနေတဲ့ စိတ်တိုနေတဲ့ အချိန်မှာ ထိပ်တိုက်မတွေ့တာ ကောင်းပါတယ်။ "မနက်မှ ပြောရအောင် " ဆိုပြီး ကြည်ကြည်လင်လင် နိုးထလာတဲ့ နံနက်ခင်းမှာ အဲဒီ အငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါ။
၁၀။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတွေကို လက်ခံပေးပါ။
ကိုယ်ရော သူရော အိုမင်းလာကြမှာ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ရင့်ကျက်မှုတွေ ခိုင်မြဲတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကတော့ တည်ရှိရမယ်မဟုတ်လား။ အတူတူ သွားနေတဲ့ ခရီးမှာ ပေါ်လာတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြစ်အနာအဆာလေးတွေကို ချစ်ခြင်းအားဖြင့် လက်ညှိုး မထိုးဘဲ နေထိုင်သင့်ပါတယ်။
ကလေးမွေးပေးရလို့ ဗိုက်ကြောတွေပြတ်နေရင်လည်း ဒါမှမဟုတ် ဝလာရင်လည်း အပြစ်မမြင်ရက်သင့်သလို အလုပ်ကြိုးစားရင်း ဘီယာဗိုက်လေးဖြစ်လာတာ နဖူးလေး အနည်းငယ်ပြောင်လာတာလည်း အရေးမကြီးဘူးလို့ တွေးပေးရမှာပါပဲ။ အသက်အရွယ်ကြီးလာလို့ အရေးအကြောင်းတွေပေါ်လာလည်း "ကိုယ်ဘယ်လိုနေလဲ" လို့ မေးရင် " ကိုယ့်ယောက်ျားက ချောတာပေါ့ " " ကိုယ့်မိန်းမက လှဆဲပါကွာ " လို့ ဘဝရဲ့ အရေးအကြောင်းတွေကို ချစ်မြတ်နိုးစွာပြောပြပေးနိုင်ရမှာပါ ။ "ကိုယ် မင်းကို ချစ်တယ် " " I love you " ဆိုတဲ့ စကားလေးနဲ့ အဆုံးသတ်ပေးရင်းပေါ့။